Nikasi-tanana vehivavy bevohoka: nesorina amin’ny andraikiny ilay zandary | NewsMada
Nikasi-tanana vehivavy bevohoka: nesorina amin’ny andraikiny ilay zandary
Par Taratra sur 07/08/2020
Taorian’ny feo fanairana sy niparitaka tao amin’ny tambajotran-tserasera, afakomaly, mahakasika ilay zandary nikasi-tanana vehivavy bevohoka iray, nisokatra avy hatrany ny fanadihadiana sy ny famotorana. Vokany, voamarina ilay tranga niseho tao Ankarimbe, distrikan’Analalava, ny marain’ny alatsinainy teo. « Nosazina, araka izany, ilay zandary nandika fitsipika sy nanao herisetra na tsy nitory azy aza ilay voakasi-tanana », hoy ny fanazavan’ny Zandarimariam-pirenena, loharanom-baovao. Fantatra fa zandary, lehiben’ny « poste fixe » ao Ankarimbe, izy ary nesorina aminy izany andraikiny izany.
Tsiahivina fa nifanena tamina ramatoa iray tsy nanao arotava io zandary io. Nanevateva azy rehefa noteneniny mikasika izany ilay vehivavy. Tsy nahatanty izany anefa ilay lehiben’ny “poste fixe” ka namelaka ilay ramatoa. « Nangataka sazy hafa rehefa tsy nanaiky nanao “pompe” ilay vehivavy noho izy bevohoka. Fihetsika nahatezitra ilay zandary izany. Nofelahiny ilay vehivavy ka torana », hoy ny filazan’ny loaharanom-baovao iray hafa. Raha ny vaovao farany, hanao fanambarana mahakasika ny tranga ilay ramatoa niharam-boina io ao Ambanja.
Nanome baiko hentitra sy fampitandremana ny zandary manerana ny Nosy, araka izany, ny Zandarimaria ary maneho koa fialan-tsiny feno amin’ilay renim-pianakviana. Manentana ny rehetra izy ireo hifandray amin’ny « service de traitement des doléances de la gendarmerie » amin’ny laharana 034 12 005 25 na ny 034 14 013 88 raha misy seho na tranga toy izao.